चितवनमा कडा निषेधाज्ञा गर्ने तयारी, स्थानीय तहका प्रमुखहरुसंग छलफल - Thulo khabar
चितवनमा कडा निषेधाज्ञा गर्ने तयारी, स्थानीय तहका प्रमुखहरुसंग छलफल
चितवन, साउन ३१–
चितवनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण दर तिव्र रुपमा बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कडा निषेधाज्ञा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नियमित बैठक बसीरहेको छ ।
केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) प्रेमलाल लामिछानेले कोरोना संक्रमणदर डरलाग्दो अवस्थामा बढ्दै गएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि छलफल भइरहेको बताए । त्यसै अनरुप आइतबार विहान जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुसंग छलफल गरिएको प्रजिअ लामिछानेले जानकारी दिए । ‘निषेधाज्ञालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे हामी छलफलमै छौं’ प्रजिअ लामिछानेले नारायणी अनलाइनसंग भने ‘स्थानीय तहबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ, हामी निर्णय गर्छौ ।’
कतिपय प्रमुखहरुले निषेधाज्ञामा कडाई गर्दा रोगले भन्दा भोकले बढी मान्छे मर्न सक्ने औल्याएका छन् भने कतिपयले केही समयका लागि भए पनि चेन ब्रेक गर्न निषेधाज्ञा अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । प्रजिअ लामिछानेले निरन्तर सरोकारवा निकायसंग छलफल गरिरहेका छन् । केन्द्रको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि भोलि (सोमबार) राति १२ बजेदेखि सकिदै छ । एक साता अघि निषेधाज्ञा थप गर्दा चितवन प्रशासनले केही कडाई गर्दै पसलहरु साताको तीन दिन मात्रै संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै रेष्टुरेन्टहरु दिउँसो १२ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
चितवनमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार साउनयता शुक्रबारसम्म चितवनमा चार हजार ७ सय २५ जना संक्रमित थपिएका छन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएयता महिना दिनमै संक्रमित भएको उक्त संख्या अहिलेसम्मकै बढी हो । यसअघि वैशाखमा ४ हजार १ सय ७७ जना संक्रमित भएका थिए । चितवनमा संक्रमित हुने कुल संख्या हालसम्म २२ हजार ८ सय ३४ पुगेको छ ।
गत वर्षको साउन महिनामा जम्मा १ सय ५ जना संक्रमित भएका थिए । त्यसपछि संक्रमण बढेको भनेर गत वर्षको भदौ १ गतेदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लाग्यो । निषेधाज्ञाका बीचमा पनि गत वर्षको कात्तिकमा पहिलो लहरको सबैभन्दा धेरै २ हजार १ सय ५८ जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालीहरु मलेसिया प्रवेश गर्न के-के प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ? कसले प्रवेश गर्न पाउछन?
गुगलको एन्ड्रोइड अटोमोटिभ ओएस अब होन्डाका गाडीहरुमा आउने
विष नहाली तरकारी फल्दैन, रैथाने जातका बीउ मासिंदै – Thulo Khabar
दु:खद खबर ! मलेसियामा ब्यापार,ब्यावसाय गर्दै आएका ब्यावसायी भक्त योङहाङ्ग लिम्बुको मृ’त्यु ।